सन्चो भएर परिवार पाल्ने सोच बनाएका डिलबहादुर दाई १० दिन मै अस्ताए, परिवारमा ४ सन्तान सहित श्रीमतिको बिचल्ली दर्दनाक भिडियो बाहिरियो ! – Complete Nepali News Portal
सन्चो भएर परिवार पाल्ने सोच बनाएका डिलबहादुर दाई १० दिन मै अस्ताए, परिवारमा ४ सन्तान सहित श्रीमतिको बिचल्ली दर्दनाक भिडियो बाहिरियो !
मंसिर १८, गुल्मी
गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ८ किसिकोटका डिलबहादुर गाहा बिरामी भएर धेरै बर्षसम्म कुजिएर बसे । उपचारको लागी आर्थिक अभावमा उनि लामो समयसम्म छटपटाईरहे तर पनि कही कतैबाट केही पनि सहयोग पाउन सकेनन। सरकारले दिएको अपाङ्गता भत्ताबाट आफ्नो जिवन निवार्ह गदै आएका गाहा उपचार कै अभावमा मंसिर १७ गते यो संसार् छोडरे सधैको लागी अस्ताए । बिगत ८ बर्षदेखि प्यारालाइसिसले एक हर नचल्ने भएका उनको ४ जना स साना सन्तान छन भने एक श्रीमति पनि । लामो समयसम्म उपचारको अभावमा बिस्तारमा लडेका उनको केही उद्धार हुन्छ की भनेर हामीलाई खबर गरे पछि हामी तिहारको अर्को दिन मंसिर २ गते उनको घरमा पुगेर सहयोगको अपिल सहितको भिडियो तयार गरेका थियौ । तर बिडम्बना प्राबिधिक कारणले हामीले त्यो भिडियो समय मै सार्वजनिक गर्न सकेनौ ।
त्यसको १५ दिन मै उनले यो संसार छोडेर बिदा भएका छन । आफुले उपचार भए आफ्नै मेहनतले परिवार पाल्ने बताएका उनि अहिले हाम्रो माझमा छैन । परिवारको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ । परिवारमा १३ दिनको क्रिया उम्काउने अवस्था पनि नरहेको छिमेकी खड्क बोहराले जानकारी दिए । पहिले उनको श्रीमति सुत्केरी हुदा पनि समाजले नै नुन तेल उठाउर पालनपोषण गरेको अर्को छिमेकी तथा स्थानिय नेता बाबुराम बोहराले बताउछन । उनका छोराछोरीको भबिष्यमा ठुलो मान्छे बन्ने रहर पालेका छन । तर अब न टेक्ने डाली र¥यो न त समाउने हाँगा नै । बाबुलाई उपचार गरेर बचाउन नसके पनि उनका छोराछोरीको उज्जवल भबिष्यको लागी यो भिडियो हेरर देश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीजनहरुलाई आफु सक्दो सहयोग गर्न अपिल गर्दछौ । सहयोगको लागी तपाईले भिडियो हेरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपालमा सहयोग को लागि पत्रकार महेश बोहरा (Mahesh Bohara Chhetri) को डिटेल हामीले दिएका छौ पक्कै नामावली सहित एक एक पैसा पिडित लाइ हस्तातरण गरिने छ !
Mega bank Tamghas gulmi
account number 0490050068900
Mobile number +977 9847389115
युके तथा अरु बाहिरी देश बाट सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने मलाई (Tika Adhikari) सम्पर्क गर्नु होला !
आफ्नी प्रेमिकालाई अर्कैले श्रीमती बनाएपछि अन्तिम
माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भने नेपाली शब्दकोषमा तपाईंले पढ्नुभएका नराम्रा शब्दहरुको...
सियोनाको आमा भन्नु हुन्छ : अब धेरै समय बाँकी छैन...